By vijayafm on	 May 7, 2019 अन्तरवार्ता, देश, फोटो फिचर, विविध खबर, स्थानीय
४७९ योजनाहरुमध्ये ४३९ वटा सम्झौता
वित्तीय लक्ष्य जम्मा २५ प्रतिशत
गाविस हुँदा खासै विकासको अनुभूति गर्न नपाएका देवचुली नगरवासीहरुले नगरपालिका बनेपछि छिटै र ठूलाठूला विकासको सपना साँचेका थिए । नगरपालिका बनिसकेपछि भएको निर्वाचन र स्थानिय तह बनिसकेपछि समृद्ध नगरपालिका बन्ने विश्वास धेरैको छ तर नगरमा चालु आर्थिक वर्षको २ महिना मात्रै बाँकी रहँदा कूल योजनाको रकममा २५ प्रतिशतमात्रै वित्तीय लक्ष्य प्राप्त भएको छ । यसले पनि योजना सम्पादनमा ढिलाइ भएको देखिन्छ । प्रतिनिधि आएको पनि करिब २ वर्ष बितिसकेको छ । यो समयसम्म देवचुली नगरको विकास र सुशासनका लागि भएका प्रयास र आगामी ३ वर्षको योजनासँगै आर्थिक वर्षको समीक्षासहित हामीले देवचुली नगरपालिकाका नगर प्रमुख पूर्णकुमार श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ, उहाँसँग विजय खबर पत्रिकाका सम्पादक श्रीधर उपाध्यायले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश
यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ
देवचुली नगरपालिकाको विकास निर्माण कसरी अघि बढिरहेका छन् ?
देवचुली नगरपालिकाको विकास निर्माणका काम जसरी अघि बढ्नुपर्ने थियो त्यसरी अघि बढ्न सकेको छैन र पनि जुन ढंगले भइरहेको छ त्यो सन्तोषजनक नै रहेको छ काम अघि बढिरहेका छन् ।
देवचुली नगरपालिकाको वार्षिक कार्यप्रगतिलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?
हामीहरुको पूर्वाधार विकासतर्फ नगरस्तरीय ९७ वटा योजनाहरु छन् । ३ सय ८२ वडा स्तरीय योजनाहरु रहेका छन् । यी ४ सय ७९ योजनाहरुमध्ये ४ सय ३९ वटा सम्झौता भइसकेका छन् । सम्झौता भएका योजनामध्ये २५ प्रतिशत वित्तीय लक्ष्य रहेको छ । अरु योजनाका काम भइरहेका छन्
योजना सम्पादनमा ढिला भएजस्तो लाग्दैन ?
काम अघि बढिसकेका छन् । थोरै–थोरै बाँकी छन् । अधिकांश योजना सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेका छन् । बिल भौचरका काम र रकम जान ढिला र बाँकी देखिएकाले यो रेकर्डमा नदेखिएको मात्रै हो । कामहरु धेरै अघि बढेका छन् । योजना सम्पन्न हुने अवस्थामा नै छन् । वडाका योजना उपभोक्ताबाट नै भएका छन् । बिल भौचर आउन र मिलाउन बाँकी भएकाले यस्तो देखिन गएको हो ।
आर्थिक वर्षको अन्तिममा रकम कसरी खर्च गर्ने भन्ने देखियो । आजसम्म हुन नसकेका काम अब बल्ल हुँदै छन् । असारे बजेटको प्रभावकारिता कस्तो होला ?
त्यसरी हामीले बजेट सिध्याउने काम मात्र गरेका छैनौँ । असारमा गएर भुक्तानी गर्ने गरेका छैनौं । देवचुली नगरपालिका पारदर्शी तरिकाले अघि बढेको छ मेरो नजरमा कहीँकतै नगरपालिकाले कुनै पनि दुई नम्बरी काम गरेको छैन । असारमा भुक्तानीको कुनै काम हुन्न । अब हामीले जेठ महिनामा सबै भुक्तानी गछौँ ।
यहाँको ५ वर्षे कार्यकालमध्ये २ वर्ष व्यतीत हुन लागेको छ । यो दुई वर्षमा भएका महŒवपूर्ण काम के हुन् ?
यो दुई वर्षमा हामीले पूर्वाधरतर्फ बाटो स्तरोन्नति गरेका छौं । छ मिटरदेखि १२ मिटरसम्म पर्खालसहितको बाटो विस्तार गरेका छौँ । ५० प्रतिशत कालोपत्रे बाटो स्तरोन्नतिका काम भएका छन् । अबको ५ वर्षभित्र नगरका सबै बाटो कालोपत्रे हुन्छ । सोही योजनाअनुरुप हामी अघि बढेका छौँ ।
विकास भनेको बाटो भन्दै बढी बजेट खन्याएको देखिन्छ । शिक्षा स्वास्थ्यलगायत अन्य कुरा पनि छन् बाटो कालोपत्रे गर्दैमा समृद्धि हुन्छ ?
हाम्रो देवचुली नगरपालिकामा विकास निर्माणमध्ये पूर्वाधारमात्र हाम्रो ध्यान गएको छैन । नवलपुर जिल्लामा हेर्ने हो भने शिक्षामा सबैभन्दा बढी लगानी गर्ने नगरपालिका भनेको देवचुली नगरपालिका नै हो । मेयर खाजा कार्यक्रमदेखि विभिन्न विद्यालयमा सहयोग गर्ने रकम प्रदान गर्ने गरेका छौं ।
अबको तीन वर्षका लागि नगरपालिकाको सपना के हो ?
अबको तीन वर्षको सपना भनेको नगरपालिकामा रिङरोडको अवधारणा लिएका छौं र त्यो पूरा गर्नेछौं । देवचुली नगरपालिका र गैंडाकोट नगरपालिकाको संयुक्त चक्रपथ बनाउने कुरा छ त्यसका लागि प्रदेशमा कुरा भएको छ । लिखित रुपमा नभए पनि डिपिआर गर्ने तयारी भइरहेको छ । अर्कोतर्फ खोलाको सबै डिपिआर भइसकेको छ । सोहीअनुरुप सबै ठाडो खोलाहरुलाई तटबन्धन गरी नगरवासीको जीउधनको सुरक्षामा ध्यान दिएका छौं । राष्ट्रिय निकुञ्जबाट निस्कने जनावरबाट हुने क्षति रोक्न रकम विनियोजन गरेर मेस जालीको सुरुवात गरेका छौं । प्रदेशबाट पनि त्यो कामका लागि सपोर्ट हुने आश्वासन पाएका छौं ।
देवचुली नगरवासीले छुट्टै अनुभुति गर्ने तपाईंको तीनओटा प्राथमिकतामा के के पर्छन् ?
हामीले बढी खानेपानीलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । त्यस्तै देवचुली डाँडामा जाने पदमार्गको निर्माण गर्दैछौं र त्यहाँ खानेपानीको व्यवस्था गर्दैछौं । विभिन्न ठाउँमा बोरिङ राख्ने काम भइरहेको छ । वडा नम्बर ४ को झाँक्रेमा पानी पु¥याउने प्रयास गरेका छौं ।
विद्युतीकरणको विस्तार कार्य कसरी हुँदैछ ?
बिजुलीको कुरा गर्ने हो भने कुमसोत, कीर्तिपुर र बाह्रकोलमा लाइन पुगिसकेको छ । अब बन्दिपुरमा मात्र बाँकी छ । बन्दिपुरमा पनि बिजुली पु¥याउने कुरा भइरहेको छ । विद्युत् प्राधिकरणसँग कुराकानी भइरहेको छ ।
नगरको सिंचाइका लागि के हुँदैछ ?
नगरको सिंचाइका लागि वडा नम्बर ९ र १० मा कुलोको काम सुरुवात भइसकेको छ । बोरिङमार्फत प्रत्येक वडामा सिंचाइ पु¥याउने योजनाका साथ लागेका छौं ।
शिक्षा क्षेत्रमा धेरै लगानी गरेका छौं भन्नुभयो त्यो शिक्षाको लगानी के हो ?
विद्यालय भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि रकम विनियोजन गरेका छौं । दरबन्दी पु¥याउन सकिएको छैन । सामान्य समस्या समाधान गर्दै अघि बढेका छौं । बाह्रकोलको विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्दैछौँ । बन्दिपुर र कीर्तिपुरका विद्यालयका लागि रकम विनियोजन गरेर काम गरिरहेका छौं । नगरका हरेक विद्यालयलाई आलोपालो आवश्यकता पूर्ति गर्ने गरेका छौं ।
कृषि पकेट क्षेत्र भनेर केही छ ?
हामीले त्यस्तो पकेट क्षेत्र भनेर कुनै कार्यक्रम सुरु गरेका छैनौं । स्थानीयको आकांक्षा नभएर पनि यो कार्यक्रम तय गरेका छैनौं । तर पनि पशुपालन, बाख्रापालन, माछा र तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ उनीहरुलाई चेतना अभिवृद्धि गर्ने तयारीमा छौं ।
पर्यटनको प्रवद्र्धनका लागि के तयारी छ ?
पिप्रहर होम स्टे, देवचुली डाडा पर्यटक आउन सक्ने ठाउँ हुन् । होमस्टे राम्रो छ । देवचुलीसम्म जाने बाटाको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने देखिन्छ । हामीले यसको डिपिआर तयार गरी अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । हामी त्यो सोचमा रहेका छौं ।
हामीले सुशासनका लागि काम गरिरहेका छौं । कर्मचारी अभावमा केही समस्या छ । छिटोछरितो हुन सकेको छैन । हामीले सकेसम्म कुनैपनी सेवाग्राहीले दुःख नपाऊन् भन्ने हिसाबले प्रयास गरिरहेका छौं । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा हेरफेरले पनि हामीलाई गाह्रो भयो । अब यी अधुरा रहेका कामहरु जनताले चाहेअनुरुपका काम गर्दै अघि बढ्नेछौं । जनप्रतिनिधिहरु पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ । देवचुली नगरपालिकाको विकास छिट्टै हुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
समय र कुराकानीका लागि तपार्इंलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ ।
मलाई पनि यो अवसर प्रदान गर्नुभएकामा तपाईं लगायत विजय परिवारलाई मेरो र देवचुली नगरपालिकाका तर्फबाट धन्यवाद छ ।